CNN's Chris Cuomo anogadzira asina kupfeka akauya mumukadzi Cristina's yoga vhidhiyo - Nhau
Kuru Varaidzo Macelebs Nhau Style
Kudzoka munaKurume, Chris Cuomo weCNN akaburitsa pachena kuti anga ave akawanikwa aine coronavirus . Zvino muna Kubvumbi, akazivisa zvese nezve hondo yake inonetesa na COVID-19 , achinyora zviratidzo zvake nezvaakasangana nazvo - uye nemukadzi wake sei uye mwanakomana vakazozivikanwa zvakare kuti vane hutachiona.
Zvino zvinoita kunge muna Chivabvu, Chris akaburitsa kure, zvakanyanya: Muviri wake wakashama.
Sekureva kweshumo yaJune 8 kubva Peji Rechitanhatu , Chris akabatwa mubhu kumashure kweiyo yoga vhidhiyo yakadhirowewa pasocial media nemukadzi wake, mutori wenhau Cristina Greeven Cuomo.
Sonia Moskowitz / Getty Mifananidzo
Makuhwa mukoramu yeNew York Post - iyo yakaburitsa chinyorwa kubva muvhidhiyo, iyo yainoti yakabviswa - inorondedzera kuti Chris akashama aionekwa sei kuseri kweSouthhampton, New York, kumba kuburikidza nepasi-kusvika-padenga windows Cristina akafananidza vhidhiyo yake mukati.
Sekureva kwePeji rechitanhatu, vhidhiyo yacho yakanyorwa zvakatenderedza May 27 uye ikadzimwa mushure meizvo inotsanangura sevamwe vateveri vane maziso egondo 'vakabata skrini yegweta raive nemakore makumi mana nemapfumbamwe-rakashandurwa -Cuomo Prime Time' .
Yakagadziridzwa Ashtanga tsika, resonance kufema uye chant yekutenda kuna mwari mune zvese zvinhu. Iyi tsika inotikurudzira kuziva tsika dzinotitadzisa, kutendeukira kune yakavhurika pfungwa uye kutora mukana wese kudzidza.
Chinyorwa chakagovaniswa na Cristina Cuomo (@cristinacuomo) paJune 6, 2020 pa4: 14 pm PDT
Kunyangwe Chris kana Cristina vasina kutaura nezvenyaya iyi, zvakakodzera kuti uzive kuti mune yazvino yoga vhidhiyo iyo Cristina yakatumira pa Instagram musi wa6 Chikumi - iyo, zvinongoerekana zvaitika, yakanzi chikamu 'Yakazara mwedzi yoga' - yakadhirowewa machena machena kuitira kuti vafukidze akawanda emahwindo ayo anoratidza kutarira kuseri kwake (uye, pamwe, murume wake).
Jake Gyllenhaal, makumi masere nemasere, 'super smiley' nemusikana mutsva, 22
bruce anoda kuve murume futi
zvakadii muchato wemamiriro akaita mari
anoita rob dyrdek ave nemukadzi
ndiani jim parson akaroora futi
chii chakaitika kuna ellie goulding
aubrey zuva iro pauly d